Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): December 2013
at 12/28/2013 04:28:00 AM
အခု နောက်ပိုင်း highlight ဖြစ်လာတဲ့ စကားတစ်လုံးကတော့
at 12/27/2013 01:08:00 PM
“ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင်တွေပဲ နေတာ မဟုတ်ဘူး ” ဖြစ်ပါတယ်
အဲဒီနောက်မှာ ကပ်ရပ်ပါလာတဲ့ စကားကတော့ Census ကောက်မယ်
ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် ကချင် ဆိုတဲ့ category ကို ထပ်ခွဲလိုက်တာ
၁၂ မျိုးရှိပါတယ်၊၊ လူဦးရေ အလိုက် လွှတ်တော်အမတ် ကွာမှာဖြစ်သလို အခွင့်အရေး
လည်း ကွာမှာဖြစ်တယ်၊၊ အဆိုးဆုံးကတော့ ကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာကြီးကို ဖျောက်ပြီး
“ အခြား ” နာမည်တစ်ခုခု တောင် ပြောင်းချင်နေပါပြီ၊၊
မူလ ဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတိုင်း တန်းတူ အခွင့်အရေးရဖို့နဲ့ တရားမျှတ
တဲ့ အစိုးရ တစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းလာရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို သေးသိမ်သွားအောင် လုပ်
နေတာပါ၊၊ မင်းတို့ အခွင့်အရေး သိပ်မတောင်းနဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း မပေးဘူး ...
မင်းတို့လည်း မပေးဘူး... ဒီနိုင်ငံမှာ “ဗမာအခွင့်အရေးသာ အကောင်းဆုံး” ဘာလို့လဲ
ဆိုတော့ ဗမာအများဆုံး ... ဒီဘူတာဆိုက်ဖို့ လုပ်နေတာပါ၊၊ ကြည့်ပါဦး ကချင်၊ ကရင်နီ
ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း အားလုံးကို ခွဲနိုင်သမျှ ခွဲချလိုက်တာ... ဘယ်သူ့ အခွင့်
အရေးမှ ဂရုစိုက်စရာမလိုတော့လောက်အောင် သေးသိမ်သွားကြတယ်၊၊ လူဦးရေ
လည်း အင်မတန်နည်းသွားတယ်... ၀.၅ -၅ % ပဲဖြစ်ကုန်တယ်၊၊ တိုင်းရင်းသားဆို
တဲ့ ထုတည်ကြီးက လူမျိုးစုငယ်များ ဖြစ်သွားတယ်၊၊ Code နံပါတ် ၁၀၁ ကစတာ...
၉၁၄ ထိဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၈၁၃ မျိုးခွဲချလိုက်တယ်၊၊ ဘယ်ခံနိုင်မလဲကွယ်၊၊
ကချင် နဲ့ ရှမ်းနီ သားတစ်ယောက်က ဘယ်အမျိုးမှ မလိုက်ဘူး၊ ကြားနေမယ်ဆိုရင်
code နံပါတ် ၉၁၄= အခြား ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ရောက်သွားမယ်၊ အဲဒါ ရိုဟင်ဂါတွေကို
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကုတ်နံပါတ်၊၊ ကဲ... ကြည့်၊၊
သန်းခေါင်စာရင်းဆိုတာ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါ၊၊ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့
သံသယ ၀င်စရာအတိပါ၊၊ ရိုးသားတဲ့ အစိုးရ မဟုတ်ဘဲ သန်းခေါင်စာရင်း
at 12/24/2013 01:13:00 PM
Myen niahkawhkam hkawseng prat hpe hkaja yu yang tinggyengaakyu ara lu wa na matu kanu kawa kahpu kanau niaasak hpe dan di kau na matu myit li dum ai ni n rai ma ai. Myenmung shanglawt lu wa ai shani kaw nna dai ni du hkra prat dep ten de du shang wa sai raitimung Myen asuyaaakyang gaw laklai rawt jat wa ai lam n nga ai.
Prat 1-3 (Anoratha, Bayinnaung, Alonghpaya) ten hta Myenmung lawu daw na bum nga masha ni hpe Myen amyu byin hkra gara hku shabyawng kau wa ai zawn, ndai prat4hta mung bum nga masha yawng hpe shabyawng kau na matu 1962 ning Ne Win daru magam zing ai shani kaw nna masing jahkrat tawn sai. Ne Win hpe kade n ju ai Myen General raitimung, Ne Win jahkrat tawn ai policy hpe dai ni du hkra shadik shatup wa masai.
Ndai ten hta bum nga masha ni hpe jahten sharun kau lu na matu bum nga masha ni ra sharawng ai ningmu ni lang nna shamawng jaw nga ma ai. Ga shadawn :- Myenmung gaw federal hkrang lang ai democracy mungdan gaw-gap na re majaw mungdan hpe makawp maga na hpyendap mung Federal Army hkrang byin pru wa na matu hkyen sa wa magang sai. Dai zawn re ai democracy mungdan hpe uphkang na matu Aung San Suu Kyi gaw President byin tai wa mai ai. Constitution hpe mung mungmasha ni ra sharawng htaphtuk dum ai hku gram la mai na lam lang hte lang ndau shamawng wa masai.
Maga mi de rai jang, Myenmung kaw masha myu bawsang 135 nga ai lam ding yang ndau wa masai. Yaw shada ai lam gaw, masha myu bawsang shagu gaw laksan mungdaw mying shamying la mayu ai ni hkrai re. Myenmung zawn re ai mungdan kaji langai kaw mungdaw 135 tawn na matu gaw manghkang kaba galaw la ai sha rai na re majaw mungdaw mying hpe masha myu bawsang mying n lang ai sha kaga grau htaphtuk ai mying ni lata lang lu hkra mahkrun jahtuk nga ma ai.
Dai masing hta la kap nna du na ra ai aten kadun hta Myenmung ting na yuptung jahpan hkan hta na ma ai lam mungdan ting na masha yawng chye shajang nga sai re. Dai shaloi Myenmungamyu bawsang chyarang gaw myu 135 sha n rai na sai. Amyu hkying kaba jat wa na masing re. Anhte Wunpawng amyu ni myu6nga ai kaw na myu tsa lam jat wa na re. Ndai lam hte seng nna gara hku jawm galaw na lam buga de na myitsu salang ni gaw tinang amyu niashangwang kata kaw bawngban ai zawn kaga hpu nau bum nga amyu ni hte mung jahkrup nga masai lam jawm na lu nga saga ai. Madung gaw Wunpawng Myusha mying “KACHIN”, Nambat gaw 101 ngu jawm bang na lam jahkrup nga masai. Mungdan kata kaw jawm shakut nga ai zawn, maigan de du nga ai hpu nau ni mung maigan de du nga ai kaga bum nga myu bawsang ni yawng hpe hpaji jaw hkat shadum hkat ai marang e, mungdan tingamatu mungmasa lam hta kahkyin gumdin lam lu wa nna yawngamatu awngdang ai lam lu wa na re.
Myen asuya galaw wa ai masing shagu gaw bum nga masha yawng hpe Myen amyu de byawng shang wa na masing hkrai rai wa sai. Dai majaw myu bawsang shagu gaw tinang amyu hte mungdanaamying shingteng hpe makawp maga tawn lu na matu myu langaiahpang langai rawt malan wa masai. Dai hte maren Ningbaw Kaba Lahtaw Zau Seng gaw 1961 February5ya shani myusha lam yan hta npawt nhpang tawn nhtawm rawt malan lam woi awn hpang wa sai. Shing rai Myenmung ting na rawt malan hpung ni yawng gaw myusha lam yan kaw npawt nhpang tawn nna rawt malan hpang wa ai hkrai rai wa sai.
Dai zawn re ai shingdu lam hta hkan nna Myenmungarawt malan labau hta myusha lam yan gaw yit kau n mai, tsaw htum ai pungding kaw jawm tawn wa saga ai. Shing rai rawt malan hpung ni yawngapungding gaw myusha lam yan hta ahkyak jawm tawn ai marang e, bum nga masha myu langai hpra hta n-gun kaba wa nna dai bum nga masha ni yawng pawng hpawm dat ai shaloi n-gun na chying kaba ai hpawngchyawm byin wa na hpe Myen asuya hku nna asan sha mu ya ai majaw jahten sharun kau lu na matu ladat amyu myu lang wa sai.
Shing re ai masing hta hkan nna rawt malan hpung ni gaw myusha lam yan hta npawt nhpang tawn wa ai kaw na dai ni na ten hta law malawng gaw, “Mungmasa hpe mungmasa ladat hte sanglang la na” ngu ai Myen asuya kaw na madun dat ai jut de jawm gayin mat wa masai. Myusha lam yan hpe shamat kau ai rai yang, mungmasa lam hta lang na n-gun mung hkan shamat kau sai majaw rawt malan hpung law malawng gaw gap hkat jahkring tawn nhtawm Myen asuya woi awn sa wa nga ai myusha shamyit lam yan de ndum shamyi hkan yan nang sa wa nga ai hpe mu dat yang na chying hkrit hpa tsang hpa rai wa sai.
Myenmungamungmasa labau hpe hkaja yu yang, ahkyak ai mungmasa lamyi shagu hta Wunpawng Myusha myitsu salang ni shang hparan ya ai hkrai rai wa sai. Dai ni na ten hta byin pru wa ai manghkang gaw mungdan tingamatu shadawn sharam n lu, na chying ahkyak ai manghkang kaba rai nga sai majaw uhpung shagu na Wunpawng Myusha myitsu du salang ni jawm hpawngchyawm dawdan ai marang e, mungdan ting na rawt malan hpung ni yawng gaw myusha lam yan hta la kap nna mungmasa ningmu mahkrun langaiapolicy npu kaw rau jawm hkawm sa na matu Laiza zuphpawng kaw jahtuk la lu masai. Ndai masing gaw tsun n dang manu kaba ai shawng nnan na ninggam awngdang ai lam rai wa sai.
Satanalit gaw kaning re ai awngdang lam hpe raitim aten dep jahten sharun kau lu na matu rai nga ai hpe Ja Chyum laika kaw na hkaja la mai nga ai. Dai hte maren Wunpawng Myusha niawoi awn awngdang lam hpe jahten sharun kau lu na matu shadaalapran kaw nampum latup bang ya ai marang e, aten kadun laman Wunpawng Myusha niakahkyin gumdin lam hpe jahten kau lu ai nangshoi nangsha nsen ni mawng pru wa magang sai. Ndai zawn re ai mahtai hpe maram yu yang, anhte amyu ni gaw kaga amyu ni hpe mungmasa numdaw nkau kaw lam woi awn lu ai zawn satan waagunglau ai hpe koi yen kau lu na matu Yehowa jaw da ya ai machye machyang hpe lang shaman ai madang rai wa nga sai.
Dai ni na ta tut bungli hpe maram yu yang, tai hpyen wa gaw rawt malan hpung ni hte hkrum shaga shagu myusha lam yan hpe koi kau nhtawm n-gun kya nga ai mungmasa lam hta ginchyum woi dat lu hkra shakut nga ai hpe mu lu ai. Dai masing hpe mu ya ai Wunpawng salang ni gaw myusha lam yan hta madung tawn nna hkrum bawngban awngdang wa lu na matu aten la nna jahtuk nga ma ai hpe maram lu ai.
Ndai zawn re ai hpaji shingjawng poi kaw awngdang wa lu na matu shawng lam kaw myit simsa ai hte ta tut dawdan galaw sa wa lu na matu na chying ahkyak ai zawn, shingdu kaw nga let hpaji jawm jaw nga ai ni mung ahkyak kaba rai nga ai. Wunpawng Myusha ni gaw myusha lam yan hta shara mi kaw nlawm yang shara mi kaw lawm nga chyalu re. Shing rai anhteayaw shada tawn ai pandung de ahkum ara du wa shajang na matu gaw anhte yawngakahkyin gumdin ai nyan hpaji atsaman-gun rai nga ai hpe kam let shakut sa wa ga law.
DVB - ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ပညာရေး ရန်ပုံငွေအတွက် အလှမယ် ဂုဏ်ရည်အေးကျော် ပါဝင်
at 12/24/2013 12:53:00 PM
DVB - ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ပညာရေး ရန်ပုံငွေအတွက် အလှမယ် ဂုဏ်ရည်အေးကျော် ပါဝင် youtube.com DVB TV - 22.12.2013 - ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ရန်ပုံငွေအတွက် ဘ၀များနဲ့အရောင်များ ဆိုတဲ့ Photography Event လှုပ်ရှားမှူမှာ အလှမယ် ဂုဏ်ရည် အေးကျော်က မော်ဒယ် အဖြ...
Myu sha lam yan hta uhpung karan gyin hka ai lam nnga sha ya na zawn hpu nau ni shada myit hkrum zuphpawng ai lam galaw
at 12/23/2013 12:28:00 PM
By : LachidKachin,KRC,Jabrang FB,Nsang Gumsan
Yup tung jahpan hte seng nna Kachin yawng myit hkrum sai
at 12/22/2013 12:34:00 PM
Hkawp myitrum manang ni,Ngwi Pyaw Kabu Gara Hkristmas rai u ga! shakram dat ai yaw.
17-19. 12.20133ya, Padang Hkrun Lam Rung Hall kaw,shawa n-gun 447 tup hte “WP Amyu (Kachin) A Shawng Lam Amyusha Masa Lam Sanglang Hpawng Hte Bawngban Zuphpawng” galaw ga ai.Masat da ai nhtoi gaw 17-18.2ya sha raitim, n kre lu ai majaw,19ya shani hkying hkum4bai matut ai.Yawng jawm dawdan ai mahtai gaw, “Kachin ngu langaisha” re hpe ningdang ninghkap ai masha langai pyi n nga hkra,myit hkrum lata sharawt da lu sai re.
M asuyae2014 March hta Yuptung jahpan garai n hta yang,tinang shawng hta da na bungli kaba galaw na matu hkyakhkyak Komiti hpaw da sai.Dai komitiamying hpe, “ Kachin 101 Sanglang Myit Sharawt Komiti”ngu,shingteng amying jaw da saga ai.Kachin101 ngu ai gaw shanhte jaw ai code number re.Ndai Komiti gaw M asuya ni Yuptung jahpan hta ngut ai ten du hkra grin nga na rai sai.Bawngban hpawng shang lawm ai Bawsang datkasa ni gaw tinangaBuga de du wa jang tinang bawsang ni hpe chye na hkawn hkrang mat hkra bai wa tsun kahkyin gumdin da na hku re.Zuphpawng hta WP Amyusha bawsang yawng hkum ai.Yawng Kachin rai sai. Awngdang sai lam myitrum ni hpe shana dat ai.
Zuphpawng hta shang lawm lu ai;
at 12/22/2013 12:20:00 PM
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီ KSDP ရုံးချုပ်ကို တွေ့ရစဉ်
ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မနမ်တူးဂျာက ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင် ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အမြန်ဆုံးရရှိဖို့ မဖြစ်မနေ ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ဒီနေ့ ရုံးချုပ်ဖွင့်ပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
“နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးနဲ့ ဘက်စုံအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်း ကို ထောက်ခံအားပေးမည်၊ ပါတီက ပြည်သူလူထု အကျိုးကို အစဉ်အမြဲ ရှေ့ရှုလုပ်ဆောင်သွား မည်ဖြစ်ပါတယ်၊ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်မှု မပြိုကွဲရေးကို အစဉ်အမြဲ ဦးထိပ်ပန်ပြီး အထူးသဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားများအားလုံး အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို မဖြစ်မနေတည်ဆောက်သွားနိုင်အောင် နည်းလမ်းရှာပြီး ကြိုးပမ်းသွားမယ်”
ဒါ့အပြင် သူတို့ပါတီအနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နှင်းရေး လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလက ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ရရှိထားပြီး ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင်တိုင်းရင်းသားပါတီ ၃ ခု၊ လီဆူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများ ဖံွ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ စုစုပေါင်း တိုင်းရင်းသားပါတီ ၅ ခု တည်ထောင်ခွင့်ရရှိထားပါတယ်။
at 12/20/2013 12:24:00 PM
Made in Israel -- Technology We read Bible every day,It God's story ,Israel history. Now on we want to read about Israel Technology. It's our dream''''
at 12/20/2013 03:48:00 AM
အစိုးရလှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်ရင် မသင်္ကာဖွယ်ရာတွေ များလှပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားများကို သွေးခွဲနေတယ်ဆိုတာ တနေ့ထက်တနေ့ ထင်ရှားလာတယ်။ လူ့စည်း ဘီလူးစည်း ခွဲသင့်ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
လက်ရှိသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ စင်ပြိုင် သီးခြားဖက်ဒရယ်အစိုးရတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းသင့်ပါပြီ။
လက်ရှိမြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့အပြိုင် သီးခြားဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တစ်ရပ် ထားရှိသင့်ပါပြီ။
ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ၊ ဖက်ဒရယ်စစ်တပ်နဲ့ သီးခြားဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ထူထောင်သင့်လှပါပြီ။
တကယ်လို့ နောင်တချိန်မှာ မြန်မာအစိုးရက အဲဒီပြည်ထောင်စုမှာ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး လက်ခံလိုက်ရုံပဲ။
သီခြားပြည်ထောင်စုမှာ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးကို စံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီ ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ရင် အခု ရှမ်းနီကိစ္စလို အရှုပ်အရှင်းမျိုး ပေါ်ပေါက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီလိုပဲ ပြည်နယ်တွင်းရှိ လူနည်းစုများ ဖြစ်ကြတဲ့ ပလောင်၊ ဝ၊ ပအိုဝ်း၊ ကိုးကိန့်၊ လာဟူး၊ ထားဝယ်၊ နာဂ အစရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နိုင်ပါ့မယ်။
ဒါကြောင့် နောက်မကျခင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ လက်ဦးမှု ရယူထားသင့်ကြပါတယ်။ နောက်ကျရင် ရှမ်းတောင်ပိုင်းကိုလည်း အစိုးရ ဖဲ့သွားဦးမယ်။ အခြားတိုင်းရင်းသားအချို့ကိုလည်း ဖဲ့သွားဦးမယ်။ နောက်ဆုံးကျရင် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းပဲ သတ်ဖြတ်ကြရပါ့မယ်။